बक्सअफिसमा ‘छक्का पन्जा’को धमाका !!! « Salleri Khabar
बक्सअफिसमा ‘छक्का पन्जा’को धमाका !!!
प्रकाशित मिति : 14 September, 2016
काठमाडौं, नेपाल– गत शुक्रबार भदौ २४ देखि प्रदर्शनीमा आएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ ले नेपाली सिने इतिहासमा विभिन्न रेकर्ड बनाउन सफल भएको छ । हास्यव्यंग्य जानरामा बनेको यो फिल्मको निर्देशन दीपाश्री निरौलाले गरेकी हुन् । कलाकार दीपकराज गिरीलगायतले निर्माण गरेको यो फिल्मले हाम्रै समाजको यथार्थलाई ब्यङ्यको रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ । फिल्म ले सबैतिरबाट प्रसंसा पाइरहेको छ । फिल्म निक्कै मन परेको बताउदै रबिन्द्र मिश्र, हरीबंश आचार्य, लगायतले सामाजिक सन्जालमा समेत पोस्ट गरेका छन । दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, शिवहरि पौडेल, बुद्धि तामाङ, प्रियंका कार्की, वर्षा राउतलगायतका कलाकारको अभिनय रहेको फिल्मले नेपाली फिल्म ईतिहासमा एक सातामै बनाएका ५ रेकर्डस्हरु यसप्रकार छन :-
दीपा-सफल डेब्यु महिला निर्देशक
एक दिन मै एक करोडभन्दा बढीको ब्यापार
फिल्म हेर्न आए तीन पूर्वप्रधानमन्त्री
Source:- Enayapatrika and other online media…
अभिनेता दिलीप कुमारको निधन
चर्चित बलिउड अभिनेता दिलीप कुमारको निधन भएको छ ।